नेपालमा लकडाउन सुरु भएको अघिल्लो दिनदेखि नै म कार्यालय गएको छैन । मैले गर्ने कामको लागि एउटा साधरण ल्यापटप र भरपर्दो इन्टरनेट काफी छ । सोही कारण मैले यो कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को महामारीको समयमा पनि घरैबाट काम गरिरहेको छु । यसै महामारीको कारण मेरो धेरै साथीहरुले रोजगारी गुमाए तर, मैले भने अहिलेसम्म समयमा नै पारिश्रमिक पाइरहेको छु तर, मेरो काममा इन्टरनेट भने बाधक बनिरहेको छ ।
मेरो लागि घरबाट काम गर्न इन्टरनेट अनिवार्य शर्त हो । सोही कारण विगत १६ महिनादेखि भायानेट कम्पनीबाट इन्टरनेट सेवा लिएको छु । तर, यसै कम्पनीले दिने सेवाको कारण जागिर गुम्ला भन्ने मलाई पिर परेको छ । किनकी यस कम्पनी दिने सेवा भरपर्दो भएको मैले पाएको छैन । इन्टरनेट नचलेपछि पटक–पटक फोन गर्नुपर्छ । तर, कम्पनीले फोन नै उठाउँदैन । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा निःशुल्क फोन गर्न मिल्ने टोल फ्री नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिंक, सुबिसु, ब्रोड ब्याण्ड नेपाल, टेकमाइन्डस् नेटवर्क र इस्टलिंकले बाहेक अन्य कम्पनीले यो सेवा ग्राहकहरुलाई दिएको छैन । सोही कारण भायानेटमा सम्पर्क गर्ने हरेक ग्राहकले फोन गर्दा हरेक कलको पैसा लाग्छ । समस्या आइरहने भएर मैले भायानेटको नम्बरहरु ०१–५९७०४४४ तथा ९८०१०४६४१० मेरो मोबाइलमा सेभ गरेर राखेको छु । भायानेटको सेवा लिएपछि यी नम्बरहरुमा मेरो व्यक्तिगत नम्बरबाट मात्रै ४० पटकभन्दा बढी फोन गइसकेको छ । नेपाल टेलिकमको नम्बर बोक्ने मैले ल्याण्डलाइन तथा एनसेलको नम्बरमा करिब १०२ मिनेट फोन गरिसकेको छु । सास्तीसँगै फोन गर्दा मेरो कति पैसा खर्च भयो होला ? मेरो नम्बरबाहेक मैले अरुको नम्बरबाट पनि फोन गरेको हिसाव गरेकै छैन ।
भायानेटमा फोन गरेर ‘अटोमेटिक’ जवाफ आउन थालेपछि पैसा काट्न थाल्छ । भाषाको लागि, सेवाको प्रकारको लागि अंक थिच्दै जाँदा घण्टी गइरहन्छ, त्यहाँका प्रतिनिधिहरुले जवाफ फर्काउँदैनन् तर, पैसा भने काटिइरहन्छ । पुनः प्रयास गर्दा पनि सोही समस्या दोहोरिरहन्छ । केही प्रयास गरेपछि उताबाट जवाफ आउँदा मैले हरेक पटक फोन नउठ्ने समस्याबारे गुनासो गर्छु उताबाट जवाफ आउँछ, ‘धेरै सेवाग्राहीले फोन गर्नुभएको कारण समयमा जवाफ फर्काउन नसकिएको हो ।’ हो समस्या भायानेटमा नै रहेछ । भायानेट ‘गुनासोहरुकै पोको’ भएको कारण धेरै ग्राहकहरुले गुनासो गर्नको लागि फोन गर्दा रहेछन् सोही कारण धेरैको फोन उठ्दैन रहेछ भन्ने जवाफ त्यहाँकै कर्मचारीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा दिइरहेका छन् । तपाईहरु किन सेवाग्राहीहरुको सहजताको लागि टोल–फ्रि नम्बर राख्नुहुन्न भनेर मैले पटक–पटक गुनासो गरेको छु । ‘म तपाईको गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिन्छु’ भन्छन् त्यहाँका कर्मचारी तर, सम्बोधन भने हुन सकेको छैन । मैले तपाईको लाइन म्यानेजर, म्यानेजर वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर दिनुहोस् भन्दा यसो गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ त्यहाँका कर्मचारीबाट आउँछ ।
मेरो इन्टरेनेट केही दिनदेखि स्लो छ । मैले यसबारेमा पछिल्लो केहीदिनयता कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ । आज बिहान कम्पनीबाट ८ बजेर २३ मिनेट जाँदा फोन आयो । २ मिनेट ३० सेकेन्डको कुराकानीपछि त्यहाँको कर्मचारीले राउटर रिसेट गरिदिन्छु भने, मैले हुन्छ भने । केहीबेरपछि ल्यापटप खोलेको मेरो वाइफाइको सिग्नल ‘प्यासिभ’ देखायो । छिमेकीहरुको ११ वटा वाइफाइको सिग्नल देखाउँदा आफ्नै वाइफाइको सिग्नल भने गायव ! त्यसपछि मैले बिहान ८ः३५ बाट कम्पनीमा फोन गर्न थालें, पहिलो कल १ मिनेट ३३ सेकेन्ड गयो तर, अटोमेटिक आन्सर आयो फोन उठेन । दोस्रो कल ८ः३८ मा गरें ५ मिनेट ८ सेकेन्ड कुरा भयो तर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधिबाट जवाफ आयो ‘हाम्रो टेक्निकल टिम व्यस्त हुनुहुन्छ एक छिन कुर्नुहोला सर ।’ अनि फोन काटियो । ८ः४३ मा गरेको फोन क्यान्सल भयो । ८ः४४ मा ३ मिनेट ९ सेकेन्ड फोन जाँदा उताबाट जवाफ आएन । फेरि फोन काटियो । ८ः५२ मा कल गरें फेरि जवाफ ओटोमेटिमात्रै । ८ः५६ मा ६ मिनेट ५१ सेकेन्ड कुरा हुँदा आक्रोशसहित गुनासो राख्ने मौका पाइयो साथैसमस्याको बेलिविस्तार लगाइयो तर, समस्या सम्बोधन भएन । त्यहाँका कर्मचारीले एनछिनमा कलब्याक गर्ने बताए । उनले ९ बजेर ९ मिनेट जाँदा कलब्याक गरे तर, समस्या उस्तै थियो । यसबीचमा मैले भायानेटलाई आफ्नो समस्या र प्रमाणसहित इमेल पनि गरेको छु ।
मैले जेठको अन्तिम साता २ हजार ८२५ रुपैयाँ तिरेर राउटर पनि रिप्लेस पनि गरेको हुँ । तर, ४० एमबीपीएस इन्टरनेटको गति बढ्न सकेन । जम्मा अधिकतम ४ वटा डिभाइस र औषतमा २ वटा डिभाइसमा मात्रै इन्टरनेट चलाउने भएको कारणले गर्दा मैले ३० एमबीपीएसमा नेट झारेको हो तर, समस्या भने उस्तै रहेको छ । भायानेटका कर्मचारीहरुले राम्ररी कुरा गर्ने भए पनि केहीमा भने प्राविधिक ज्ञान नभएको मैले पाएको छु । आफ्नो डिभाइसहरु अन्य वाइफाइमा राम्ररी चल्ने भएको कारणले गर्दा समस्या भायानेटकै हो भन्ने प्रश्ट हुन्छ । जे होस् आज बिहानदेखि भायानेटले मेरो दिमाग खराब गरेको छ । किनकी हरेक बिहीबार हुने अफिसको भर्चुअल बैठकमा म उपस्थित हुन सकिन । इन्टरनेटको कारण महत्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको भनेर मैले कार्यालयलाई स्पष्टिकरण दिएको छु । मेरो अफिसको लाइन म्यानेजरबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यो भने थाहा छैन । नेट नचलिरहेकै बेला मलाई भायानेटसँगको करिब डेढ वर्षे अनुभवबारे एउटा ब्लग लेख्न मन लाग्यो । मैले ब्लग लेखिरहँदा कम्पनीका कर्मचारीहरुले मेरो समस्या समाधान गर्न के–के गरे मलाई थाहा भएन तर, १०ः५८ बाट नेट चल्न थालेको छ । यो कति समयसम्म हो त्यो थाहा भएन ।
मैले भायानेट जोडेको केही समयपछि एक पुरानो साथी भेट भयो । भायानेटकै पूर्व टेक्निकल टिमका सदस्य रहेका उनले कम्पनीले दक्ष कर्मचारीलाई भन्दा सिकारुहरुलाई न्युन शुल्कमा राख्ने गरेको बताएका थिए । दुई साताअघि मेरो नेट टिभीलाई भायाटिभीमा अपग्रेड गर्न आउने भायानेटकै दुई जना कर्मचारीहरुले पनि कम्पनीसँगको असन्तुष्टिको बारेमा मसँग केही कुरा गरेका थिए । कम्पनीको फेसबुक पेजमा नेट स्लो भयो भनेर कमेन्ट गर्नेहरुको संख्या हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कम्पनीले कस्तो सेवा दिइरहेको छ भनेर । अझै कतिपयले त कमेन्ट गर्न पनि उचित ठान्दैनन् बरु चुपचाप बस्छन् ।
समस्या भायानेटको मात्रै होइन नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सेवाग्राहीबाट जति शुल्क लिन्छन् त्यसको आधारमा सेवा भने दिएका छैनन् । स्रवाग्राहीले कम्पनीको आलोचना गरेको सामाजिक संजालहरुमा प्रश्ट देख्न सकिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनीहरु गुणस्तर सुधारमा लागेका छैनन् । त्यस्तै, नियमक निकाय मौन छ तर, सेवाग्राहीहरुले भने निकै सास्ती व्यहोरिरहनुपरेको छ । महामारीको समयमा कार्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण छैन सोही कारण म जस्ता धेरै जना घरबाटै काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको सहजताको लागि सेवाप्रदायक कम्पनी यस समयमा झनै जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन ? हामीले कहिले सहज रुपमा तिरेको शुल्क बराबरको इन्टरनेट सेवा पाउँछौं ?